imithi Private ezweni lethu kuragela Unyaka ngamunye odlulayo. Lokho isikhungo "Ukuxilonga Plus" (Voronezh) usebenza emkhakheni wezempilo. Odokotela of isikhungo sezokwelapha baziwa bomsebenzi wabo futhi babemhlonipha ontanga. Izinkulungwane zabantu zakwazi ukuthola impilo esilahleka amakhono abo okusezingeni eliphezulu zokwelapha. On umsebenzi isikhungo sezokwelapha lapho basebenze ngokuthula, kuzoxoxwa ngakho kulesi sihloko.
Umtholampilo "Ukuxilonga Plus" (Voronezh) - kuyinto isikhungo sezokwelapha ngokukhethekile ukuhlinzeka uhlu olubanzi lezempilo isungule inethiwekhi Amahhovisi emzini nezindawo ezizungezile. Yavula ngo-1997 futhi okwamanje ngemuva izisebenzi zayo minyaka yokusebenza irreproachable. Inombolo yomhlaba wonke yesikhungo ine imishini kwezokwelapha-zokuxilonga eziphambili lucwaningo nokuvivinywa okuhlukahlukene laboratory kanye nophenyo wezinsimbi, futhi ngempumelelo nokobana ubuchwepheshe zanamuhla Imininingwane ukweseka imisebenzi yezokwelapha.
Kwiziguli emtholampilo "Ukuxilonga Plus" (Voronezh), bangaqiniseka ukuthi bayakufa isevisi ukhululekile kakhulu futhi neqondayo. Isebenzisa ochwepheshe abanekhono, kuvumela luhlolo esheshayo ukusazi ngokunembile isifo esikuphethe, ukuzethemba nokubusa kanye esimweni esikhululekile.
Inala amathuba inikeza izakhamuzi zayo Voronezh. "Ukuxilonga Plus" (eMoscow avenue) amahhovisi eziningana ukuthi anikele ezihlukahlukene bonke abadinga ukunakekelwa ngezokwelashwa:
emitholampilo laboratory zokuxilonga;
CT nama-MRI ukuhlola;
UMnyango zabesifazane kanye Obstetrics;
umnyango Consultative nokwelashwa abadala;
iyunithi sokweluleka nokwelapha izingane.
On imisebenzi ngayinye yalezi amayunithi kwesakhiwo , sixoxa kabanzi.
Clinical laboratory zokuxilonga
Lo mnyango is in kuyithuba ihlukaniswe laboratories eziningana ezikhethekile:
Polymerase chain reaction (i-PCR);
Zonke izinhlobo izifundo zokwelapha, kwamakhemikhali, immunological, bacteriological nezinye ingase iphakamise isikhungo wezokwelapha "Ukuxilonga Plus" (Voronezh). Imiphumela yokuhlaziya kwezinye izimo kungenziwa wathola ngosuku lokuhlolwa. Kunoma yikuphi, kubonakala kuzokwenziwa esikhathini esifishane, isiguli ngokushesha ngangokunokwenzeka ukuze uthole umbono kadokotela ku isimo sempilo yabo. Ngo-laboratory, emtholampilo isebenzisa zakamuva imishini zobuchwepheshe, elisebenza ngendlela eyodwa ulwazi uhlelo.
Ultrasound uphethwe Kwenziwa nokusetshenziswa kwemishini premium-the-art emtholampilo "Ukuxilonga Plus" (Voronezh). Imiphumela yalolu cwaningo isikhungo ochwepheshe ngokushesha ukwenza uphethwe yini. Kukhona bazenza zonke izifundo ukuphathwa kwabathintwayo, ultrasound izifo zabesifazane, neurosonography, 4D-luhlolo umbungu ngemiphumela ukuqoshwa kudiski, gisterosalpengoskopiya, ukufunda isimo emalungeni, transrectal ultrasound biplanovym inzwa nokuningi.
MRI kanye CT ukuhlola
Phakathi kwezinye izinto, maphakathi "Ukuxilonga Plus" eyaba Voronezh inqubo imaging. Lokhu ulwazi kanye yesimanje indlela zokuxilonga, esiza ukwenza isithombe esicacile ngakuthathu nemikhumbi, izibilini zalo izinhlelo ezihlukahlukene umzimba womuntu. yalokho okunjalo ngeke kutholakale ezinye izindlela zocwaningo. Njengoba kuchazwe ngu umtholampilo yethu ine amabili isithwebuli - computer (CT) kanye resonance kazibuthe (MRI). Umsebenzi ahlangene lezi amadivaysi ikuvumela ukuba uthole isithombe esiphelele izitho zangaphakathi lesiguli.
Ngo kokukhulelwa kwesibeletho
Sebenzisa izindlela ezahlukene asekelayo ubuchwepheshe zokuzala esikhungweni "Ukuxilonga Plus" (Voronezh). Amasevisi emkhakheni wezokwelapha kusikisela ukusetshenziswa le nqubo elandelayo:
insemination intrauterine ;
e kokukhulelwa kwesibeletho;
Cryopreservation zemibungu bese isidoda.
Zonke yalezi zindlela ngokuphumelelayo Umtholampilo Ochwepheshe zisebenzisa. Abaningi iziguli isikhungo sika bakwazi babe abazali bajabule kuphela ngoba ukwelashwa ngaphansi kwalesi sikhungo.
ukunakwa Omkhulu maphakathi "Ukuxilongwa plus" inikezwe impilo yabesifazane uhlelo zokuzala. gynecologists Ukhululekile futhi ambiance okuphumuzayo, futhi anake 'ebona, endocrinologists, Ochwepheshe ukusiza isiguli ngasinye sokulungiselela ukukhulelwa nokuzalwa okwalandela, ukuxilongwa qualitative izifo ukuvuvukala, ezifweni ezithathelwana ngobulili, isifo webele, ezihlobene kanye nomdlavuza wesibeletho, ukuthola izindlela ezifanele inzalo. Ngaphezu kwalokho, kule uMnyango nemishini videocolposcopy.
umnyango yokwelapha Adult
Lo mnyango multidisciplinary ihlinzeka ngamasevisi kule emikhakheni yezokwelapha ezilandelayo: allergology, Endocrinology, ukwelapha amehlo, kwezokugoma, Gastroenterology, Neurology, nezenhliziyo, izakhi zofuzo, Physiotherapy. Lapha, isiguli ngasinye ungenza Ihlahlubo enze ekwelapheni izifo ze-adrenal futhi yegilo, kanye ukuqaphela ukuthi isheshe itholakale sikashukela nezinye izifo eziyingozi. zokuvimbela Esifike Ngesikhathi kuye kwasiza abaningi abanenkinga wabo ukuze ulondoloze impilo futhi kuvimbele izinguquko ezingenakuhlehliswa emzimbeni. Ngakho-ke, ngisho nangemva ukuphulukiswa ephelele bayaqhubeka uxhumane isikhungo ompetha iseluleko abanekhono, ukunakekelwa ngezokwelashwa.
womnyango wezokwelapha Wezingane
Kukhona lesigceme yangasese ezingane emtholampilo "Ukuxilonga Plus" (Voronezh). Kuyo Uthola ochwepheshe ezilandelayo: Udokotela awe-aleji-immunologist, endocrinology, ophthalmologist, udokotela wezifo zabesifazane. Bonke ngokukhethekile ukuhlinzeka ukunakekelwa kwezokwelashwa izingane futhi ungayithola indlela nasezinganeni nesineke kulencane. Ngo arsenal of umnyango ezingane has yonke imishini afanele okusebenza nezingane eziku guys. Abazali abaningi ukwethemba izingane zabo imitholampilo yezempilo kanye nezifundiswa, ngeke nanini bazisole. Ngaphezu kwalokho, esibhedlela ezisebenza ekhabetheni yokutakula, esibonakala by okusezingeni eliphezulu umsebenzi ukukhiqiza.
Ochwepheshe Umtholampilo "Ukuxilonga Plus" kukhona abaqeqeshiwe futhi akwazi ukunakekela okuhle kwezokwelapha kunoma nesineke. Isebenzisa abanekhono gynecologists, bamehlo, gastroenterologists, nangodokotela bababhekene nezifo zenhliziyo, endocrinologists zofuzo allergists, abelaphi, neurologists nezinye ongoti abaningi. Bayakwazi ukubona lesi sifo ngendlela efanele usaqala kanye ukunikela izinga okusezingeni eliphezulu kanye nokwethulwa ngokuyiko kwezinhlelo nokwelashwa kwayo. Ngemva ukuphulukisa kanye nokuvuselelwa, iziguli eziningi ukuhlala abayithandayo ezithembekile lo mtholampilo futhi ngingalokhu ngiza emuva kuye ukuzolulekwa nokusekelwa wezokwelapha. "Ukuxilonga Plus" Odokotela Centre njalo ukuze bathuthukise amakhono abo futhi khona imisebenzi ehlukahlukene zezemfundo. Emsebenzini wabo ayesebenzisa njengoba izindlela eside lukhona futhi ngentuthuko yakamuva emkhakheni wezokwelapha. Kuyinto inhlanganisela ephelele njalo kungaholela elamukelekile. amakhasimende eziningi achazwe izikhungo zethu kungaba ukuqinisekisa lokhu.
Isikhungo sezokwelapha "Ukuxilonga Plus" inikeza uhlu olubanzi amasevisi wonke umuntu. Ezidume kakhulu tibalwe lapha ngentasi. Kulesi umtholampilo kungaba avivinywe inkinga khona komzimba, isifo sikashukela, ukukhumuzeka kwamathambo, ukuntuleka kwegazi emzimbeni, i-hepatitis, i-HIV, ugcunsula, helminth ukutheleleka egazini futhi ezisicasulayo, ibhekane ucwaningo kwamakhemikhali kanye jikelele emitholampilo lwahlolwa ukuze nakomaka ukuvuvukala, umsebenzi yegilo, imifanekiso, isimila nakomaka , futhi equliswa ultrasonic luhlolo tomographic bese uthole imiphumela ngaphakathi kwamahora ambalwa ngemuva luhlolo. Lezi zinqubo lwenziwa emtholampilo kuhambisana nazo zonke izimfuneko kwenhlanzeko sanitary.
Amanani emtholampilo "Ukuxilonga Plus" kuhluke yeningi, futhi kubonakala sengathi umthwalo Abaningi kakhulu izakhamuzi zedolobha. A igazi luhlolo elula izobiza isiguli ruble 40 kuphela futhi izobanjwa emini. Uhlaziyo, enesihloko esithi "ukudla 90" zizokwenziwa zingakapheli izinsuku zebhizinisi 1-5 nezindleko Isivakashi ngendlela ephawuleka kakhulu isamba - 6800 ruble. Nokho, izindleko kakhulu nezinqubo kuhluka ruble 300-500. Lena amanani aphansi izakhamuzi ngenxa yemisebenzi ababeyenzile ezingeni eliphezulu enjalo.
Idumile isikhungo labantu "Ukuxilonga Plus" (Voronezh). Amazwana ngalokhu isikhungo sezokwelapha ukukhombisa inhlangano ngokuphawulekayo umsebenzi kuwo. Lapha, isivakashi ngasinye inikezwa ukunakwa nokunakekela ngesikhathi esifanele. Zonke izikhalazo isiguli kubalwe futhi kucatshangelwe lapho wenza ukuxilongwa. Abantu basheshe basabele ikakhulukazi kahle ukwenza lolu cwaningo lokungena ahlukahlukene emtholampilo "Ukuxilonga Plus" (Voronezh). Imiphumela yokuhlaziya kwabaningi babo wakwazi ukuthola ambalwa emva ukulethwa izinto eziphilayo azithathe, ngaleyo ndlela kakhulu umsebenzi usheshe zokuxilonga.
Izinkulungwane zeziguli ancamela ukuthatha maphakathi "Ukuxilongwa plus" ukuhlolwa. Voronezh - idolobha elikhulu futhi kukhona inkululeko ebanzi ekukhetheni ezikhungweni ezahlukene zokwelapha. Nokho, abantu bayo usizo kule umtholampilo ukuthi ukhuluma idumela elihle. ukunakekelwa okungabizi futhi izinga impilo esikhathini sethu siyindlala okukhulu. Ngakho-ke, ebhekisela 'Yokucwaninga plus "ingakusiza wenze izinqumo ezinhle. Hlale ukhumbula lokhu futhi ube nempilo!
Indlela sifake Baubles isikimu kahle?